Tontolo manga. Ny làlan'ny ranomasina, ny ho avin'ny Tany - Ikkaro
firosoana >> boky >> Tontolo manga. Ny fizotry ny ranomasina, ny ho avin'ny Tany
Amin'ity lahatsoratra mahafinaritra sy mampivarahontsana sy mahavaky fo ity Sylvia A. Earle dia mijery ny ranomasina sy ny fomba nanimban'ny olombelona azy. Izy io koa dia mitantara ny fiantraikan'ny ranomasina amin'ny fiainantsika ary mampiseho amintsika ny maha-zava-dehibe ny fitehirizana azy io ho toy ny fepetra ilaina amin'ny famonjena antsika. Ilay boky araka ny nolazaiko dia mahatonga anao hahatsapa fa very izahay. Lany ny ranomasina sy ny loharano. Nandoto sy nandrava azy tamin'ny ambaratonga tsy nampoizina isika ary tsy hahafinaritra ny vokany.
Feno izahay natrehin'ireo ny olan'ny fanararaotana plastika. Mandritra ny ora rehetra, ny gazety sy ny haino aman-jery dia milaza amintsika hoe inona ny plastika mandoto, ny olana ara-tontolo iainana sy ara-tontolo iainana matanjaka aterak'izany ary mampiseho amintsika ny vahaolana, ny haitao na ny famoronana mety hanangonana plastika. Ary marina ny anao, fa ity dia iray amin'ireo olan'ny tontolo iainana tsy raharahantsika. Mamono ny ranomasina isika ary noho izany ny planetantsika.
Ny ranomasina no hadinon'ny natiora lehibe na eo aza ny lanjany.
[nasongadina] Hividy Tontolo manga. Ny fizotry ny ranomasina, ny ho avin'ny Tany[/ Nasongadina]
Famerenana ny boky
Mizara telo ny lahatsoratra.
Tamin'ny voalohany dia niresaka momba ny ranomasina, ny karazany, ny foto-kevitry ny fanoherana tsy manam-petra ary loharanom-pitaovana tsy mety ritra sy tsy mety simba izy. tsy nisy nieritreritra fa afaka mitaona ny ranomasina toy izao isika
Amin'ny faharoa dia lazainy amintsika fa sahirana ny ranomasina ary noho izany isika koa. Fitrandrahana harena an-kibon'ny tany, fanariana, fanovana toetrandro, fiovan'ny simika, fahaverezan'ny harena voajanahary. Zava-misy masiaka izay mametraka antsika eo amin'ny toerantsika
Ny fahatelo amin'ny antso ho amin'ny hetsika. "Tonga ny fotoana" mbola ara-potoana isika, saingy tsy maintsy mihetsika ary tsy maintsy manao izany dieny izao.
Amin'ny ankapobeny, ny boky dia milaza amintsika ny momba ny loharanom-pahalalana azo ampiasaina any an-dranomasina sy ny fomba nanaparitahana azy ireo, ny fomba nieritreretantsika fa ny ranomasina dia tsy mety ritra, tsy azo ovaina, izay tsy vitan'ny olombelona manitsy azy io ary ahoana no ahitantsika fa Tsy izany no izy ary efa natahotra ny handray andraikitra izahay.
Fandroana ny zava-misy ny manomboka mahafantatra ny iray amin'ireo olana ara-toetrandro lehibe sy tontolo iainana izay tsy maintsy hatrehintsika ary ny fiheverana fa nosoratana tamin'ny 2012 ny boky
Ny fanontana nataoko dia iray amin'ny RBA Duivulgación niara-niasa tamin'ny National Geographic niaraka tamin'ny fandikan'i Efrén del Valle Peñalmín
Iza moa i Sylvia A. Earle?
Izy dia biolojista an-dranomasina, mpikaroka ary mpanoratra boky sy fanadihadiana izay nanokana ny fiainany ho an'ny ranomasina sy ny fitehirizana azy. Izy no Prince of Asturias Award ho an'ny Concord, lehiben'ny fitantanana ny ranomasina sy ny atmosfera nasionaly (NOAA), ary mpanorina ny Deep Ocean Explosion and Research. Mpikaroka tany voalohany an'ny National Geographic ary tamin'ny taona 2009 dia nahazo ny anaram-boninahitra Hero of the Plant nomen'ny magazine Time. Ambasadaoro amoron-dranomasina izy ary mpanoratra boky 15.
Tiako ianao hampiasa ny fomba rehetra eo am-pelatananao - sarimihetsika, fitsangatsanganana, Internet, sambo mpisitrika vaovao! - hamoronana fampielezan-kevitra mandrisika ny fanohanan'ny olom-pirenena ny tambajotra eraky ny faritra voaaro an-dranomasina, «toerana misy fanantenana» ampy tsara hamonjy sy mamerina ny ranomasina, ny fo manga an'ny planeta.
Ohatrinona? Ny sasany miteny hoe 10%, ny hafa 30%. Manapa-kevitra ianao: ohatrinona ny fitiavana tianao holaniana amin'ny fiarovana? Na izany aza, tsy ampy ny 1%.
Amin'ny fampiharana, ny faniriana TED dia ny kinova fohy an'ny zava-drehetra amin'ity boky ity:
Nandritra ny tantaram-piainanay, ny planeta manga indrindra dia nahatonga antsika velona hatrany. Tonga ny fotoana hamerenantsika ilay sitraka.
Lohahevitra sy fanamarihana lehibe momba ny boky
Betsaka ny fanamarihako ao amin'ilay boky ka tsy ilaina ny maka tahaka azy manontolo. Fahafinaretana lehibe rehefa mahaliana ny zava-drehetra.
[nasongadina] Tsy mitondra kofehy iraisana izy ireo. Izy ireo dia zavatra izay nosoratako mba tadidiko sy / na hamerina sy hanadihady ary hianarako bebe kokoa momba an'io lohahevitra io.
Fitsipika vaovao ho fiarovana ny harena voajanahary
Hatramin'ny 1950, niaraka tamin'ny fanombohana ny jono indostrialy, dia nahenantsika haingana ny loharanom-pahalalana ho latsaky ny 10%, tsy amin'ny faritra sasany ihany, fa tsy amin'ny tahiry sasany ihany, fa amin'ny vondrom-piarahamonin'ireo karazana lehibe ireo, hatrany amin'ny tropika ka hatrany amin'ny bao .
Io fanapotehana io dia tsy manimba ny ho avin'ny trondro sy ny mpanjono miankina aminy ihany, fa mety hiteraka fandaminana tanteraka ny tontolo iainana anaty ranomasina, izay misy vokany tsy fantatra manerantany.
Bycatch, fanjonoana zavaboary manakana ny harato na manintona ny baza mikendry karazan-karazany hafa. Tamin'ny tatitra nataon'ny FAO, nosoratan'i Dayton L. Alverson, biolojista sy ny mpiara-miasa aminy maromaro, dia niresaka olana momba ny ady. Araka ny angon-drakitra voaangona avy amin'ny World Wildlife Fund, biby mampinono an-dranomasina mihoatra ny 300.000, sokatra sy vorona aman'hetsiny ary trondro sy invertebrata an-tapitrisany taonina no navadika ho bycatch isan-taona.
Pejy fanampiny momba ny tiritra (pejy 84 - 90)
Azontsika atao ny mamela ny helok'ireo teo alohany, na ny akaiky na ny lavitra, noho ny famongorana ny volon'ondry farany volom-borona, ny dodo farany, ny ombivavy farany ary ny tombokavan'ny moanina farany, satria tsy azon'izy ireo ny vokatr'izay nataony. Fa iza no hamela antsika raha tsy mianatra amin'ny zavatra niainana taloha sy ankehitriny isika hananganana soatoavina vaovao, fifandraisana vaovao ary fanajana ny rafitra voajanahary izay mitazona antsika velona?
Tamin'izaho mbola kely dia tiako ny nitokana zavatra hafa - kilalao, famantaranandro, baomba taloha - ary mbola henoko ny raiko miteny hoe: 'Napetrakao daholo ve ireo sombin-javatra rehetra? Afaka mitaingina azy indray ve ianao? Azonao atao ve ny mampandeha azy miasa?
Iza fa adala, manontany an'i Aldo Leopold, no hanary ireo entana toa tsy misy ilana azy?
Tantaran'ny tetikasan'ny biby an-dranomasina (HMAP) (p. 141 - 143)
Ny valin'ny fanontaniana hoe maninona no zava-dehibe ny biodiverse dia tsotra: ny sisa amin'ny fiainana dia afaka mitohy tsy misy antsika, saingy tsy vitantsika izany raha tsy misy azy ireo. Ny fampihenana ny fahasamihafana eo amin'ny fiainana araka izay ataontsika ankehitriny dia midika ho fotoana vitsy kely kokoa ho an'ny fanambinana antsika. John C. Sawhill, filohan'ny Consevancy natiora teo anelanelan'ny taona 1990 sy 2000, dia nanolotra antony lehibe iray mba tsy hahavery ny famirapiratan'ny fiainana intsony: fa amin'ny zavatra inoantsika, dia mandà tsy handrava »
Avy amin'ny fivorian'ny firenena 38 izay natolotry ny United Nations Environment Programme (UNEP) tamin'ny 1982
Ny mpanoratra dia milaza amintsika ny momba ny fivorian'ny Firenena Mikambana tamin'ny 1982, izay mampikaikaika ireo olona manana ny maha izy azy ny zavatra ataontsika amin'ny ranomasina.
Nanontany i Thor Heyerdahl, mpikaroka tany norveziana: 'Aiza no ahafahantsika mandefa ireo mandoto rehetra…? Manasa ny tany isika ary manipy ny zava-drehetra ao ambanin'ny karipetra, ary ity karipetra ity, ny ranomasina, no ampahany manandanja indrindra amin'ny planeta ", ary nanampy hoe:" Matoky aho fa ny olona ankehitriny dia manadanja ny haben'ny ranomasina ary manao ambanin-javatra ny lanjan'ny fiainana eto ambonin'ny planeta »
Russell Peterson, filohan'ny fikambanana Aubudon: "Mampiasa ny ranomasina ho fanariam-pako izahay, ary manimba ny fiompiana trondro"
Jacques Cousteau: Ny anjaran'ny zanak'olombelona dia mifamatotra amin'ny rano hatramin'ny fiandohan'ny fiainana.
Sylvia A. Earle: Ny ranomasina dia miankina amin'ny toetr'andro. Ireo no manana ny fahasamihafana lehibe indrindra eo amin'ny fiainana. Raha miova ny ranomasina, dia toy izany koa ny toetran'ilay zavamaniry »
Ny iray amin'ireo loza izay dinihina ihany koa dia ny fanimbana ny CO2 izay mitarika amin'ny fiakaran'ny hafanana haingana sy tampoka
Rehefa manafana hatrany ny ranomasina dia afaka mamoaka karbonina voafandrika an-tapitrisany an-tapitrisany ao anaty indray mipy monja. Ny fanimbana ny fanangonam-bokatra metana hydrates dia mety hiteraka fihotsahan'ny tany ambanin'ny ranomasina izay mety hiteraka tsunami lehibe
Ny sasany manombatombana fa ny habetsahan'ny karbaona entina amin'ny alàlan'ny chemosynthesis dia mifandraika amin'ny fametahana ny karbaona, ny fitehirizana ary ny fandefasana amin'ny alàlan'ny tranokala mahasarika.
Ny tena mampiahiahy dia ny fiantraikan'ny fitomboan'ny asidra amin'ireo zavamiaina bitika fotosintetika izay mamokatra betsaka ny oxygen ao amin'ny atmosfera. Ny hazo, ahitra ary zavamaniry hafa eto an-tany dia zava-dehibe amin'ny fitazonana ny gazy atmosfera amin'ny mari-pahaizana sahaza ho an'ny fiainana ankehitriny eto an-tany, anisan'izany isika, fa ny zavamiaina photosynthetic any an-dranomasina no tena miasa mafy rehefa hiteraka. oksizenina ary mitazona ny simia planeta ho maharitra. Rehefa mihabe ny asidra dia mihalehibe ireo zavamiaina mandefitra asidra, ary ny sasany izay vitsy isa ankehitriny dia mety hitombo. Ireo izay mitaky ny tontolon'ny alkaline izay nampiavaka ny simia ranomasina nandritra ny taona an-tapitrisany maro dia ho faty.
Ny krizy ankehitriny dia iray amin'ny fahafaham-po. Na dia mety ho azon'ny sasany aza ny 450ppm sy ny fiakaran'ny mari-pahaizana roa, ny fotoana farany nanafanan'ny tany toy izao, ny haavon'ny ranomasina dia nahatratra am-polony metatra ary samy hafa tanteraka ny toetrandro sy ny toetrandro ankehitriny.
Firy ny fiarovana?
Avy amin'ny lahateny niarahana tamin'i George W. Bush
Nandritra ny adiny iray sy sasany dia niresaka momba ny ranomasina izahay, ny fanjifana angovo, ny fiovan'ny toetr'andro, ny fako plastika ao anaty ranomasina, ny fomba fanjonoana ary ny filàna ny fiarovana ny Nosy Leeward Hawaii. "Raha misy ny mpanarato dia tsy maintsy misy ny trondro," hoy aho tamin'ny fotoana iray. Mba hisian'ny trondro dia tsy maintsy misy toerana azo antoka. Eo an-tanety dia voaaro ny honahona mba hanolotra gana sy fialofana gisa hahafahan'izy ireo manainga sy hanabe ny zanany. Hajaina ny zotram-pifindra-monina ary misy fetrany hentitra ny fotoana sy ny isan'ny vorona azo tratrarina. Ny jono indostrialy any an-dranomasina dia nampihena ny karazany maro mihoatra ny 90%. Ny hoaviny, sy ny an'ny ranomasina iray manontolo, dia mahatsiravina, raha tsy misy toerana azo antoka ho an'ny biby sy zavamaniry ao an-dranomasina, toy ny misy eny an-tany »
Ity resaka ity dia nifarana tamin'ny fiarovana feno ny Nosy Leeward any Hawaii. Tsangambato nasionaly an-dranomasina Papahanaumokuakea, ranomasina 362.000 kilometatra toradroa. Mbola latsaky ny 1% ny ranomasina no voaaro
Zava-misy mangatsiaka fotsiny sy zavatra hodinihina
Karazana horita sy hena telonjato eo ho eo no manome fahafaham-po ny ranomasina, ary ny razambeny dia hita miharihary ao amin'ireo firaketana fôsily, nanomboka tamin'ny antsasaky ny arivo tapitrisa taona. Mbola nisy telonjato tapitrisa taona talohan'ny nisehoan'ny dinôzôro. Ny ADN izay mampiavaka antsika dia tsy niseho hatramin'ny 500.000 taona taorian'ny nahaterahan'ny cephalopods
Mbola tanora ny vovo-dranomasina ankehitriny
Ny Ranomasina Mediterane dia ritra tanteraka teo anelanelan'ny dimy sy roa ambin'ny folo tapitrisa taona lasa izay
Ny Antarctica dia rakotra bile nandritra ny roa-polo taona farany
Ny cap Arctic dia lehibe kokoa noho ny dimy tapitrisa taona lasa izay.
William Beebe, dia nanamboatra hull varahina handalinana ny haran-dranomasina Bermuda tamin'ny faramparan'ny 1920. Eo ambanin'ny Ranomasina Tropika
Ny fampandrosoana ny rafitra ampiasain'ny mpisitrika ankehitriny dia nanomboka tamin'ny 1942, rehefa nihaona tamin'ny injeniera Émile Gagnan i Jacques Cousteau, kapitenin'ny tafika an-dranomasina frantsay, hitady fomba hiainana anaty rano noho ny fantson-drivotra tery. Vokatry ny dinika nataon'izy ireo dia ny valva izay novolavolain'i Gagnan hantsaka solika ho lasa motera fiara no lasa mpandrindra mandeha ho azy voalohany amin'ny antsitrika.
Ny sambo mpisitrika dia nohajaina indrindra ho an'ny tanjona ara-tafika hatramin'ny taona voalohan'ny taona 1930 rehefa niara-niasa tamin'ny mpamorona milina sy injenierie nidina an-tsitrapo Otis Barton i William Beebe mba hamolavola rafitra misy tariby, ny bathysphere, izay nanompo azy ireo tamina andiam-panaronana. Antsasaky ny kilaometatra ny halavany akaikin'i Bermuda
The Tragedy of the Commons (pejy 57 - 59)
Ny angano momba ny famokarana maharitra maharitra (pejy 59 - 63)
Fikarohana ny fotoana fandefasana sary avy amin'ny tetik'asa Balog's Extreme Ice Survey.
[misongadina] Raha tianao ny zava-misy mahaliana momba ny siansa, aza hadinoina ireo lahatsoratra ananantsika eto amin'ny Internet zava-misy ara-tsiansa mahaliana y te hahafanta-javatra momba ny bibikely. [Nasongadina]
Olana amin'ny plastika
Manitatra ny lahatsoratra aho miaraka amin'ny fampahalalana mahaliana sy mahaliana momba ny iray amin'ireo olana izay lamaody ankehitriny ary miresaka momba ny plastika ny rehetra. Saingy mendrika lahatsoratra iray manokana ity
Ahoana ny fametrahana Keras sy TensorFlow amin'ny backend amin'ny Ubuntu
1 Famerenana ny boky
2 Iza moa i Sylvia A. Earle?
3 Lohahevitra sy fanamarihana lehibe momba ny boky
3.1 Firy ny fiarovana?
4 Zava-misy mangatsiaka fotsiny sy zavatra hodinihina
5 Olana amin'ny plastika